Formaprod: tohanana ny tanora tantsaha mpandraharaha - ewa.mg
News - Formaprod: tohanana ny tanora tantsaha mpandraharaha
L’article Formaprod: tohanana ny tanora tantsaha mpandraharaha a été récupéré chez Newsmada.
Pilo kely #4667 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4667 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Novokarina tao amin’ny “FabLab Solidaire Mamiratra”. Nanolotra fanampiana ho an’ny CCO (Centre de Commandement Opérationnel) eny Ivato ny Orange Solidarité Madagascar ny 13 aogositra 2020. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny fikambanana, Josie Andrimbeloma fa natokana ho an’ireo ivon-toeram-pitsaboana ao amin’ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Anosy, Diana, Analanjirofo, Bongolava, Menabe, Sava, Sofia, Haute Matsiatra ary Boeny ireto « visières de protection » miisa 2.000 sy « flacons de gel hydroalcoolique » miisa 21.000 ireto. Hahazo anjara amin’izany ihany koa ny SOS Villages d’Enfants sy Compassion Madagascar. Araka ny fanazavany hatrany fa famenon’ireo fitaovana natolotra tamin’ny 18 aprily 2020 sy tamin’ny 16 jona 2020 izy ireto ary fanehoana ny fahavonan’ny Orange Madagascar amin’ny fanahonana ny fitondram-panjakana manoloana ny ady atao amin’ity valan’aretina ity. Nambarany fa novokarina tao amin’ny “FabLab Solidaire Mamiratra” ireto « visières de protection ». Tsara ho fantatra fa ny faran’ny taona 2015 no notokanana ity ivon-toerana ity izay miorina ao amin’ny SOS Village d’Enfants Andrainarivo. Toerana iray ahafahana mifehy teknolojia nomerika, mampivoatra ny fahaiza-manao amin’ny lafiny nomerika sy miomana amin’ny sehatry asa any aoriana any. Nirina R. Cet article ORANGE SOLIDARITE MADAGASCAR: Voarain’ny CCO Ivato ireo fanomezana andiany fahatelo est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article ORANGE SOLIDARITE MADAGASCAR: Voarain’ny CCO Ivato ireo fanomezana andiany fahatelo a été récupéré chez Délire Madagascar.
Rugby- Can: nomontsanin’ny Namibianina tamin’isa mavesatra ny Makis
Sempotra tanteraka ary tsy nisy masoandro nihiratra ny lalao ho an’ny ekipam-pirenena malagasy nanoloana ny Namibianina, nandritra ny fifandonana tao amin’ny kianjan’ny Lisea excellence_Alassame Ouatarra de Grand Bassam, omaly, tamin’ny 7 ora hariva.Nasongadin-dry zareo Namibianina hatrany fa isan’ny sangany ary voafehiny tanteraka ity taranja ity manoloana ireo firenena maro eto Afrika. Na niezaka nanohitra aza ry Racom sy ry Big teo amin’ny fitondrana ny baolina, saingy tsy nahitam-bokany izany nanoloana ireo mpifanandrina taminy. Nanan-tombo tamin’ny ara-batana ry zareo Namibinina ka nahita baolina naterin-tanana telo izy ireo. Tafavadika avokoa ny roa tamin’ireo niampy penalty roa ka nahazoany isa 25 no ho 0 nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin’ny fidirana faharoa kosa, nifoha tamin’ny torimasony ny Makis de Madagascar ka nahatonga baolina nentin-tanana iray teo amin’ny minitra faha-46. Tetsy an-kilany, nanindry hatrany ny Namibianina ka nahita hirika nanampina ny isa efa azon’izy ireo. Vokany, lavo tamin’ny isa 52 no ho 10 ry Big sy ny namany, nandritra ny lalao voalohany nataon’izy ireo. Na izany aza, niady hatramin’ny farany ny mpilalao malagasy, saingy izao resy izao. Ny 11 jolay ho avy izao kosa, hifanandrina amin’ny Côte d’Ivoire ny Makis. Marihina fa tafiditra ao anatin’ny fifanintsanana ahazoana tapakila hiatrehana ny fiadiana izay ho tompondaka eran-tany atao any Frantsa, amin’ny taona 2023 ity fifaninanana ity.Tsiferana R.L’article Rugby- Can: nomontsanin’ny Namibianina tamin’isa mavesatra ny Makis a été récupéré chez Newsmada.